Bruno Fernandes oo ka tagay xarunta tababarka Sporting Lisbon… (Kooxdee ku sii jeedaa?) – Gool FM
(Lisbon) 02 Agoosto 2019. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaa ka tagay xarunta tababarka kooxda Sporting Lisbon, markii uu ka qeyb galay kulan lagu dhammaystirayey bixitaankiisa.
Jarriiradda Record ee dalka Portugal ayaa warinaysa in Bruno Fernandes iyo wakiilkiisa Miguel Pinho ay la kulmeen madaxweynaha kooxda ee Federico Varandas iyo agaasime Hugo Viana maanta oo Jimce ahayd.
Kooxaha Manchester United iyo Tottenham oo ka wada dhisan Waddanka Ingiriiska ayaa wada doonaya xiddigan khadka dhexe ee Bruno Fernandes, iyadoo kooxda Spurs ay wakiillo u dirtay Portugal shalay si ay heshiis ula gaaraan xiddigan goolasha badan dhaliya.
Bruno Fernandes ayaa ka tagay garoonka tababarka kaddib markii uu kulanka soo dhamaaday, waxaana muuqaalka xiddigan oo garoonka ka baxaya duubaqy CMTV, iyadoo la rumeysan yahay in kulankan lagu dhammaystirayey heshiiska uu laacibkan ku baxayo.
Yeelkeede, Bruno Fernandes ayaan weli la ogeyn kooxda uu ku biiri doono, inkastoo la aaminsan yahay inuu midkood ku biirayo kooxaha Man United iyo Tottenham.
Warbixinnada laga helay dalka Portugal ayaa sheegaya in kooxda Tottenham ay ku horreyso saxiixa xiddigan, iyagoo Fernandes dareenkooda u weeciyey, inkastoo uu diiradda u saarnaa Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, kaddib markii ay ku guuldareysatay Spurs soo xerogelinta xiddiga Real Betis ee Giovani Lo Celso waxa ay u jeedatay Bruno Fernandes, inkastoo dalabkoodii ugu horreeyey ee 60-ka milyan ee euro ahaa ay soo diiday Sporting Lisbon, waxaana kooxda reer Portugal ay kabtankooda dul dhigeen 70 milyan oo gini.
Sporting Lisbon waxa ay aaminsan tahay in Tottenham ay bixin doonto lacagta ay ku doonayaan Fernandes, inkastoo kooxda Manchester United ay iyaguna sare u qaadi donaan dalabkooda, kaddib markii ay heshiis rikoor ah oo dhan 85 milyan oo gini ku qaadatay maanta difaaca dhexe ee Harry Maguire.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Liverpool vs Manchester City ka hor kulankooda Community Shield… (Yaa ku leh xiddigaha ugu badan?)